जनगणनामा भन्दा भूकम्पपीडितका रूपमा अनुदान लिने परिवार धेरै
समाचार हिमनाथ देवकोटा
रसुवामा राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक नतीजामा देखिएका भन्दा बढी परिवारले भूकम्पपीडितका रूपमा सरकारबाट अनुदान लिएको पाइएको छ।
केले घटायो जनसङ्ख्याको वृद्धिदर?
नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० पुगेको आँकडा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको छ। गत मंसीरमा भएको जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै विभागले जनसङ्ख्याको वार्षिक वृद्धिदर ०.९३ प्रतिशत कायम भएको जनाएको छ।
यी हुन् जनसङ्ख्या घटेका ३२ जिल्ला
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतीजा अनुसार, देशका ३२ जिल्लामा जनसङ्ख्या घटेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाकाे जनसङ्ख्या घट्यो २०६८ सालको जनगणनाले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र नौ लाख ७५ हजार ४५३ जनसङ्ख्या रहेकोमा २०७८ सम्म आइपुग्दा यो घटेर आठ लाख ४५ हजार ७६७ छ।
नेपालको जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० पुगेको छ।
जनगणनाको प्रारम्भिक नतीजा तीन महीनाभित्र, जन्मदर औसतभन्दा कम राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को मूल गणना सकिएको छ। प्रत्येक १०/१० वर्षमा गरिंदै आएको जनगणनाको १२औं शृङ्खला २५ कात्तिकदेखि ९ मंसीरसम्म सञ्चालन गरिएको थियो।
जनगणना: ५४ वटा प्रश्न किन? किरातीहरूबीचको विविधताले गर्दा थर, भाषा लगायत धर्म सम्बन्धी अन्योल देखिन्छ। त्यसमाथि गैरकिराती गणकलाई विस्तृत जानकारी नहुँदा किरातीबारे सही तथ्याङ्क आउनेमा ढुक्क हुन सकिन्न।
आगामी जेठमा राष्ट्रिय जनगणना, घरपरिवार संख्या ७० लाख नाघेको अनुमान केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आगामी २५ जेठदेखि ८ असारसम्म देशभरिका हरेक घरमा पुगेर राष्ट्रिय जनगणना गर्ने भएको छ। एक दशकपछि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गर्न लागेको जनगणनामा नेपालीको संख्या मात्रै नभइ आर्थिक, सामाजिकलगायतका पक्षबारे समेत विस्तृत अध्ययन गरिने भएको छ।
राष्ट्रिय जनगणनाका प्रश्नावली राजपत्रमा प्रकाशन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २६ साउनमा स्वीकृत गरेको प्रश्नावली सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाको जानकारीका लागि आज नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ।
मत सर्वेक्षण गर्न नपाइने प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको भनाइ
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले मत सर्वेक्षण गर्न नपाइने बताएका छन् ।